Ndewo - A na-eme anyị na Spain
E Dere 30 November, 2018 By HB
Abanye anyị na Spain Magazine, saịtị ebe ị ga-ahụ ihe niile gbasara ngwaahịa Gourmet kasị mma na Spain dị ka mmanya, cheese, Iberian, olive olive, wdg. Ebe ndị dị egwu ileta, ndị nwe ha, ọkwá kasị mma, na-arụ ọrụ na Gran Vía na ọtụtụ ndị ọzọ.
A na-eme anyị na Spain bụ ụwa nke ọdịbendị, gastronomy, mmanya, egwu ... Ụzọ ndụ Spanish na nduzi maka ndị niile chọrọ ịbanye na Spain dị egwu, ma ọ bụ dịka onye njem nleta ma ọ bụ dịka nwa amaala nke mba a.
Maka ndị mbido anyị na-akwado gị ịbanye na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị maka oke mma maka ngwaahịa Spanish: www.made-in-spain.com
Kwuo ma soro anyị na netwọk:
Category: Enweghị Ngalaba
Otu echiche na "Ndewo"
10.0.0.1 kwuru, sị:
31 Disemba, 2018 na 8: 20 pm
Na-enwe obi ụtọ maka nkwụsi ike ị tinyere n'ime blog gị na ozi zuru ezu ị na-eweta.
Ọ dị mma ị gafee blog n'otu ugboro n'otu oge, nke ahụ abụghị otu ihe ahụ nke oge a na-agbada.
Ihe magburu onwe ya gụọ! Ana m echekwa saịtị gị ma ana m etinye ndepụta RSS gị na akaụntụ Google m.
A Chọtara na Spain! Gị ụlọ ahịa nke ngwaahịa Spanish. Ụgbọ mmiri niile Europe
Echiche maka inye mmanya na Ụbọchị Nna
Vinos del Bierzo, Nkọwa nke mmalite nke ejiji n'ụwa
Aceites Camino de Aníbal, Gourmet Quality si Albacete
Ebe mmasị ọkachamara nzuzo
Kuki bụ faịlụ ma ọ bụ ngwaọrụ nke ebudatara na ngwaọrụ onye ọrụ maka iji chekwaa data nke enwere ike imelite na weghachite site na ụlọ ọrụ ahụ maka nrụnye ya. Nke ahụ bụ, ọ bụ faịlụ a na-ebudatara na kọmputa gị mgbe ịnweta ụfọdụ ibe Weebụ. Kuki na-ekwe ka ibe weebụ, n'etiti ihe ndị ọzọ, iji chekwaa ma weghachite ozi gbasara àgwà nchọgharị nke onye ọrụ ma ọ bụ ngwá ọrụ ha, dabere na ozi ha nwere na ụzọ ha si eji ngwá ọrụ ha eme ihe, ha nwere ike iji ya mata onye ọrụ
Kedu ụdị kuki ndị weebụ a na-eji?
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji kuki na-enye ohere ka ndị ọrụ jiri ya na ịnyagharịa site na ya, hụ ohere ịnweta ụfọdụ ọrụ, ma melite nhazi njikwa nke weebụsaịtị.
Kpọmkwem, ebe nrụọrụ weebụ a na-eji kuki ndị a:
Kuki Nyocha: A na-eji kuki ndị a iji nyochaa àgwà na omume nke ndị ọrụ nke ibe weebụ nakwa maka ịkọwa profaịlụ na igodo iji meziwanye nhazi na ọrụ na ọrụ.
Ngwa anyị ji jikwaa kuki ndị a bụ ihe gbasara Google Analytics (www.google.com/analytics/)
Kedu esi ejikwa nhazi nke kuki?
N'akụkụ a, ọ dị nkenke iji kọwaa otú ị ga-esi kpọtụrụ ma mepụta nhazi nke usoro na kuki na ihe gbasara ihe nchọgharị kachasị emekarị ma ọ bụ nke kachasị eme ihe.
N'echiche a, ihe nchọgharị niile na-ekwe ka onye ọrụ nweta ozi zuru ezu maka kuki ndị awụnyere na ibe weebụ, iji chọpụta na adị adị, oge ha ma ọ bụ usoro mkpochapu. N'echiche a, maka ebumnuche ọmụma, a na-enye usoro njikọ ndị metụtara ya:
N'aka nke ọzọ, onye ọrụ ahụ nwere ike ikwe, igbochi ma ọ bụ kpochapụ kuki ahụ arụnyere na akụrụngwa ya site na ịgbanwe nhazi nke ihe nchọgharị ya dịka ntuziaka ndị ahụ gosiri. Maka ebumnuche ọmụma a na-egosi na a na-emekarị nhazi nke kuki na "Mmasị" ma ọ bụ "Ngwaọrụ" nke ihe nchọgharị ọ bụla, n'ọnọdụ ọ bụla, ị nwere ike ịga enyemaka nke ihe nchọgharị gị iji dozie ma ọ bụ dozie obi abụọ na nkwanye ùgwù na-eme.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na, ọ bụrụ na egbochi kuki niile, a ga-emetụta ọdịnaya nke Weebụ na ụfọdụ ọrụ na ọrụ ya.